Maitiro Ekukwiridzira Wako Musoro Matagi ESEO (Nemienzaniso)
China, Kurume 24, 2022 China, Kurume 24, 2022 Douglas Karr
Wanga uchiziva here kuti peji rako rinogona kuve nemazita akawanda zvichienderana nekuti iwe unoda kuti varatidzwe kupi? Ichokwadi… heano mazita mana akasiyana aunogona kuwana peji rimwe chete mune yako yemukati manejimendi system.
Musoro Tag - iyo HTML inoratidzwa mubrowser yako tab uye yakamisikidzwa uye inoratidzwa mumhedzisiro yekutsvaga.
Peji Musoro - iro zita rawakapa peji rako mune yako yemukati manejimendi system kuti uwane zviri nyore.
Peji Yakananga - kazhinji H1 kana H2 tag kumusoro kwepeji rako inoita kuti vashanyi vako vazive peji ravari.
Rich Snippet Musoro - iro zita raunoda kuratidza kana vanhu vachigovana peji rako pasocial media saiti uye izvo zvinoratidzwa mukutarisa. Kana snippet yakapfuma isipo, magariro mapuratifomu anowanzo gadzirirwa kune iyo tag tag.
Ini ndinowanzo gadziridza yega yeaya kana ndiri kutsikisa peji. Panharaunda, ndinogona kunge ndichimanikidza. Pakutsvaga, ini ndoda kuona kuti ndiri kushandisa mazwi akakosha. Pamisoro, ini ndoda kupa kujeka kwezviri mukati zvinotevera. Uye zvemukati, ini ndoda kukwanisa kuwana peji rangu zviri nyore kana ndiri kutsvaga yangu yemukati manejimendi sisitimu. Kune ino chinyorwa, isu ticha tarisa mukugadzirisa yako musoro wenyaya wekutsvaga injini.
Title tags, pasina kupokana, ndicho chinhu chakakosha kwazvo chepeji kana zvasvika pakurongedza zvirimo zvemashoko ekutsvaga auri kutsvaga kuwanikwa. Uye nerudo rwezvose zviri SEO… Ndokumbirawo mugadzirise zita remapeji epamba rako kubva musha. Ini ndinogunun'una nguva dzese pandinoona saiti iyo yavasinga gadzirise zita reji peji! Uri kukwikwidzana nemamwe miriyoni mamwe mapeji anonzi Kumba!
Akawanda Sei Mavara Anoratidzwa neGoogle Kune A Musoro Tag?
Waizviziva here kuti kana yako tag tag inodarika mavara makumi manomwe ayo Google angashandisa zvakasiyana zvemukati kubva papeji rako pachinzvimbo? Uye kana iwe ukapfuura mavara makumi manomwe nenomwe, Google iri kungoenda usaite hanya nezviri mukati mushure memavara makumi manomwe neshanu? Chinyorwa chakarongedzwa zvine musoro chinofanira kuva pakati pevanhu makumi mashanu kusvika makumi manomwe. Ini ndinowanzo tarisa pakati pemakumi mashanu nemakumi matanhatu mavara sezvo nhare dzekutsvaga dzinogona kutora mashoma mamwe mavara.
Kune rimwe divi rechikero, ini ndinoona akawanda emakambani achiedza kurongedza uye kuisa yakawanda yakawanda isingakoshi kana ruzivo rwakafara mukati mavo title tags. Vazhinji vanoisa zita rekambani, iyo indasitiri pamwe nemusoro wezita. Kana iwe uri pachinzvimbo chakanakira chako vakapiswa keywords, mazita haafaniri kusanganisira zita rekambani yako.
Iko kune mashoma anosara, ehe saizvozvo:
Iwe une hombe brand. Kana ndiri ini New York Times, semuenzaniso, ini pamwe ndoda kuisanganisira.
iwe vanoda kuziva brand uye gutsikana kwazvo. Ini ndinowanzo ita izvi nevatiki vechidiki vachigadzira mukurumbira uye ivo vakaisa mari zvakanyanya mune zvimwe zvakanaka zvemukati.
Une zita rekambani iro chaizvo inosanganisira yakakosha kiyi. Martech Zone, semuenzaniso, inogona kuuya inobatsira kubvira MarTech izwi rinowanzo tsvakirwa.
Peji Peji Title Tag Mienzaniso
Kana ndichigadzirisa peji repamba, ini ndinowanzo shandisa inotevera fomati
mazwi akakosha anotsanangura chako chigadzirwa, sevhisi, kana indasitiri | zita rekambani
Fractional CMO, Consultant, Mutauri, Munyori, Podcaster | Douglas Karr
Kwidziridza Yako Salesforce uye Kushambadzira Cloud Investment | Highbridge
Geographic Peji Chita Tag Mienzaniso
Rinenge chetatu chese nhare dzekutsvaga kweGoogle zvine hukama nenzvimbo zvinoenderana Blue Corona. Pandinenge ndichigadzirisa maTagita eChinyorwa eiyo peji peji, ini ndinowanzo shandisa inotevera fomati:
mazwi akakosha anotsanangura peji | nzvimbo
Infographic Dhizaini Dhizaini | Indianapolis, Indiana
Misoro yenyaya Peji Chita Tag Mienzaniso
Pandinenge ndichigadzirisa maTeki eTaiti epeji remusoro, ini ndinowanzo shandisa inotevera fomati:
mazwi akakosha anotsanangura peji | chikamu kana indasitiri
Kumhara Peji Kugadziridza | Bhadhara Per Click Services
Mibvunzo Inoshanda Zvikuru Mumusoro Matagi
Usakanganwa kuti vashandisi veinjini yekutsvaga vari kuda kunyora zvakadzama mibvunzo ikozvino mumainjini ekutsvaga.
Vanoda kusvika makumi mana muzana ezvese zvitsvakiso pamhepo muUnited States zvine mazwi maviri akakosha.
Vanopfuura makumi masere muzana ekutsvaga kwepamhepo muUnited States aive matatu mazwi kana anopfuura.
Zvinopfuura makumi matatu neshanu emibvunzo yekutsvaga kweGoogle ane mazwi makumi mana + kureba
Pane ino posvo, iwe unowana iwo musoro wenyaya ndewe:
Maitiro Ekumisikidza Yako Chinyorwa Chitagi cheSEO (ine Mienzaniso)
Vashandisi vari kushandisa Ndiani, Chii, Sei, Rini, uye Sei mumibvunzo yavo yekutsvaga zvakanyanya kupfuura zvavakaita kare. Kuva nemusoro wemubvunzo unoenderana nemubvunzo wekutsvaga inzira yakanaka yekunyorerwa zvakakwana uye kutyaira imwe yekutsvaga traffic kune yako saiti.
Mamwe akawanda masayiti anyora nezve mazita ezita uye musoro wenyaya SEO uye handina chokwadi chekuti ndichazokwikwidza navo sezvo nzvimbo dzavo dzichitonga mazwi ane chekuita neSEO. Saka, ini ndawedzera neMienzaniso kuyedza kusiyanisa yangu posvo uye kutyaira kwakawanda kudzvanya!
Haufanire kunyara kushandisa vatambi vakawanda sezvinobvira. Kushandisa akakoshesa mazwi ekutanga kutanga, uchiteverwa neakafara mazwi anotevera, ndiyo tsika yakanaka.
Musoro Tag Kugadziridza muWordPress
Kana iwe uri paWordPress, zvishandiso senge Rank Math Masvomhu plugin inobvumidza iwe kuti ugadzire ese ako eposita zita uye rako peji zita. Izvo zviviri zvakasiyana. Iine WordPress saiti, iyo posvo zita rinowanzo mukati memusoro weti mukati memuviri wenyaya, nepo peji rako zita iri iro title tag iyo inotorwa neinjini dzekutsvaga. Pasina iyo WordPress SEO plugin, izvo zviviri zvinogona kufanana. Chinzvimbo Math inokutendera kutsanangura zvese zviri zviviri… kuti ugone kushandisa zita rinomanikidza uye zita refu mukati meiyo peji - asi zvakadaro kumanikidza iyo zita rezita reti kune urefu hwakafanira. Uye iwe unogona kuona kuratidzwa kwayo ine hunhu kuverenga:
60% yekutsvaga kweGoogle izvozvi zvaitwa kuburikidza nharembozha saka Chinzvimbo Math zvakare inopa yekutarisa nhare (kumusoro kurudyi mbozhanhare bhatani):
Kana iwe usina plugin uko iwe kwaunogona kukwidziridza ako akapfuma snippets ezvemagariro midhiya, title tags inowanzo kuratidzwa nevezvenhau mapuratifomu kana iwe uchigovana chinongedzo.
Gadzira zita rakapfupika, rinomanikidza iro rinotyaira kubaya! Tarisa mazwi akakosha pane izvo zvaunotenda kuti mushanyi anozotarisa pane uye hapana chimwezve. Uye usakanganwa ku gadziridza yako meta tsananguro kutyaira wako wekutsvaga mushandisi kudzvanya kuburikidza.
Pro Tip: Mushure mekuburitsa peji rako, tarisa kuti uone kuti unorema sei mumavhiki mashoma uine chishandiso senge Semrush. Kana iwe ukaona kuti peji rako rakamisikidzwa zvakanaka kune musanganiswa wakasiyana wemazwi akakosha… nyorazve zita rako rekumusoro kuti rienzane naro padyo (kana zvakakodzera, hongu). Ini ndinoita izvi nguva dzese pane zvinyorwa zvangu uye ini ndinoona iyo yekudzvanya-kuburikidza nemitengo muKutsvaga Console kuwedzera zvakanyanya!
Disiki: Ndiri kushandisa yangu yakabatana link ye Semrush uye Chinzvimbo Math pamusoro.
Tags: HTMLoptimizationpeji pejichinzvimbo chemasvomhu seoSearch Engine Optimizationseomusoro wenyayamazita eteki mavaramusoro wenyaya tag mazwimusoro weti tagzita reti tag optimizationzita rekuremekedza matavi akapfumatag tag seotitle tagsmazwi mumibvunzo yekutsvaga
Kunzwisisa Matambudziko (Uye Kushungurudzika) kweHTML Email Dhizaini
Gumiguru 16, 2012 pa 9:34 AM
Iyo teki yemusoro ndiyo inonyanya kukosha meta chinhu uye inzvimbo yenzvimbo. Mawebhusaiti mazhinji anoita chikanganiso chekuparadza nzvimbo iyi nekushandisa chete zita rekambani. Inofanira kushandisa mazwi makuru kutsanangura zviri papeji.
Nov 1, 2012 at 1:21 AM
chinyorwa chinotyisa uye chakadzama… Mune ramangwana, izvi zvinogona kunzi Bhaibheri reTitle Optimization! Kuombera maoko..
Nov 1, 2012 at 1:38 AM
Yakanyanya kufarirwa @wiseStep!
Ini handidi kuenderera mberi zita rangu reblog mushure mezita rangu repeji asi handizive kuti ndozviita sei. Ndiri kushandisa All In One Seo Pack plugin uye ndakanga ndabvisa %blog_title% yaive mushure %page_title%, parizvino iri %page_title%. Asi zvichiri kuenderera mberi. Muheader.php title code is, uye mu page.php title is . Chii chandinofanira kuita, kuti zita rebhurogi rirege kuenderera mushure mezita repeji.
Ini ndaizotumira kunze zvigadziriso zvako kubva kuAll In One SEO Pack Plugin uye kuisa Yoast SEO Plugin yeWordPress. Unogona kupinza marongero ipapo uye zvaunazvo pamusoro zvinofanira kushanda.